सरकारले शिल गरेको पार्टी प्यालेस भोली पल्टै सञ्चालनमा ? अनुगमन र कारवाही माथि शंका उब्जियो ! « News24 : Premium News Channel
सरकारले शिल गरेको पार्टी प्यालेस भोली पल्टै सञ्चालनमा ? अनुगमन र कारवाही माथि शंका उब्जियो !
काठमाडौं, १९ भदौ । सेवाग्राहीलाई गुणस्तरहिन मासु खुवाएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले शिल गरेको नयाँबजार मल्टी भेन्यु भोली पल्टैबाट सञ्चालनमा आएको छ । शिल गरिएको भोली पल्टैबाट सञ्चालनमा आएसँगै विभागको अनुगमन र कारवाही माथि नै शंका उब्जिएको छ ।
शनिबार एक सहकारीले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीलाई पार्टी प्यालेसले कुहिएको मासु तथा म्याद सकिएका खाद्यन खुवाएको थियो । यसपछि खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले शिल गरेको थियो ।
शिल गरिसकेको पार्टीप्यालेस विभागका अनुशन्धानपछिको अनुमति वा अदालतको आदेश विना खोल्न पाइदैन । तर नयाँ बजार मल्टी भेन्युमा भने दैनिक पार्टी भैरहेका छन् ।
र गुण नियन्त्रण विभागलाई भने पार्टी प्यालेसमा आफुले लगाएको शिल तोडिकन पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा आएको बिषयमा जानकार नै रहेनछ ।
हामीले जानकारी गराएपछि मात्रै विभागका कर्मचारी किशोर सुवेदीले मुद्धा किनार नलाग्दा सम्म पार्टी प्यालेस पुन सञ्चालन गर्न नपाइने बताउछन् । तर यता शिल लगाएको भोलीपल्टै पार्टी प्यालेस आँफै शिल तोडेर सञ्चालनमा आएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १०७ मा कसैले सर्वसाधारणले खाने पिउने वा सेवन गर्ने पदार्थमा खान, पिउन वा सेवन गर्न नहुने कुनै हानिकारक पदार्थ वा खान पिउन वा सेवन गर्न हुने कमशल पदार्थ वा हानिकार रासायनिक पदार्थ मिसावट गरी उत्पाद गर्न, विक्री वितरण गर्न वा म्याद नाघेको वा मिसावट भएको खाद्य पदार्थ विक्री वितरण गर्न वा निर्धारित स्तरभन्दा न्युन स्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ विक्री वितरण गर्न वा पैठारी गर्न वा विक्री वितरणको लागि राख्न नपाइने उल्लेख गरेको छ ।
यस उपर कसुर गर्ने वा गराउने व्यतmीलाई ५ बर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँ जरीवाना तोकेको छ ।
नयाँबजार मल्टी भेन्यु नामको पार्टी प्यालेसले सडेको मासु राम्रो भन्दै खुवाएको थियो भने भान्सामा म्याद नाघेका खाद्य वस्तहरु भेटिएका थिए ।